” စိန်ပြောင်း” ဆေးကြောကျွမ်းသူတို့ လုပ်ငန်း | တတပ်တအား
Potpourris n Evolving Presentations utilizing Padauk font n Honoring the works of Martin & Debbie Hosken, Keith Stribley.	” စိန်ပြောင်း” ဆေးကြောကျွမ်းသူတို့ လုပ်ငန်း	January 29, 2012
ဂေါ့ကြီး ကြိုက်-ကိုင်တွယ် ကျွမ်းကျင်ကြသော – သူခိုးဇော်ဂျီဖေါင့်သုံးစွဲ သူတို့အတွက် အသက်မွေး လမ်းကြောင်းတခု——-
မတရား သတ်ဖြတ်မှု ခေါင်းဆောင်ကို တိုင်တည်
Comments on: "” စိန်ပြောင်း” ဆေးကြောကျွမ်းသူတို့ လုပ်ငန်း" (9)
မျိုးသိန်း said:	February 1, 2012 at 12:13 am
ကျွန်တော်တို့လည်း သိလာပါပြီ။ ဇော်ဂျီဖေါင့်ကို ထုတ်လုပ်သူတို့ ဗြောင်ဗြောင်ခိုးတဲ့ အပြင် အခြေချရာမှာလည်း ညစ်စုတ်တဲ့ သုံးထားပြီး
ဝင်းဒိုးကို သူအမှားကိုသုံးဖို့ လှည့်စားထားတယ်။ ပြီးသူကို စက်ကမထုတ်ပစ် နိုင်အောင် ကလိမ်ကကျစ်လုပ်ထားတာ မှန်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူတို့ စံစည်းမျဉ်း မလိုက်နာနိုင် တာကို နာမရွံ့ပိတ် မစားရတဲ့အမဲ သဲနှင့်ပက်ထားဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက် ကဖီးဆိုင်တွေကလည်း သူဘဲထားပေးလို့ မတတ်သာဘဲ သုံးခဲ့ရတာပါ။ ကြိုက်လို့ မဟုတ်ရပါဘူး။ ဒီဖေါင့်ကြောင့် ဝင်းဒိုးမှ စောကတည်း မြန်မာစံဖေါင့် မထည့်ပေးခံခဲ့ ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး။
zinyaw said:	February 2, 2012 at 1:55 am
အင်တာနက် ကဖီးဆိုင်တွေက စီးပွားရေးအတွက် ဖွင့်ထားတာ။ သုံးသူလိုတာကို လွယ်လွယ်နှင့် လိုက်လုပ်ပေးလိုရတယ်။ ဘာမှ သူတို့အတွက် ပိုကုန်တာမဟုတ်ဘူး။
သက်ဆိုင်ရာနှင့် ပြည်သူ့ရဲကို ကိုချဉ်းကပ်ပြီး – ဒီဆိုင်တွေ သူခိုးဖေါင့် လက်ဝယ်ထားရှိမှု၊
သုံးစွဲမှု၊ တိုင်းပြည်တိုက်ခိုက်မှု လုပ်နေ‌‌ကြောင်း တိုင်ကြားသင့်တယ်။
ဒီဂျီဥပဒေမရှိ နေသေးလျှင်လည်း သူတို့သွားပြီး ဆိုင်ရှင်ကနေ လဘ်လဘ ဘော်ချက်လို့ ရတာပေါ့။
ဦးပြည်စိုး said:	February 5, 2012 at 1:31 am
ဒါကလည်း သုံးသူတွေ ပညာရေး အဆင့်နိမ့်မှု၊ အကျင့်ပျက်နေမှု၊ တွေအပေါ် အများကြီး မူတည်တယ်။
စဦးကာလကတည်းက ဒီလို ငလိမ်ငကျစ်လေးက စံဖေါင့်များမသုံးအောင် မျက်နှာဗြောင်တိုက်ပြီး ညာခဲ့တာဘဲ။
ဗီအိုအေ မြန်မာပိုင်းက ဆိုလျှင် ပညာရေး ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် ထိုငလိမ့်ကောင်ကို သူတို့ရဲ့ အလင်းပြဘုရား အလား သူတို့ရဲ့ ဝဘ်စာမျက်နှာမှာ တင်ပြထားခဲ့ဘူးတယ်။
Myint Soe said:	February 6, 2012 at 9:56 pm
အဲဒါ ဝီကီစာမျက်နှာ-နောက်ဆုံးရေးထားတဲ့ ပုံကိုကြည့်ပါလား။ ဇော်ဂျီအဖွဲ့က မသမာ လူလိမ့်လူညာတွေ။ ရေးတဲ့ကောင်က ထုတ်လုပ်သူ ဘယ်သူမှန်းမသိ။ နံမည်တောင် မဖေါ်ပြရဲ။ သူခိုးတွေကတော့ အရှက်ကွဲ ထောင်ထဲဝင်ရမှာ ကြောက်သားပါလား။
သူတို့ကို ပညာရှင် ၅ ဦးတဲ့။ သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် နောက် ငလိမ်အသစ် စိုးမင်းကို လက်မခံဘူးတဲ့။ ရေးတဲ့ကောင်က အကုန်လုံး သိနေပါလား။သူဘဲ သူခိုး ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဂုဏ်ယူစရာ ရှိရင်တော့ ဒီသူခိုး ၅ ဦး နံမည်တွေ အလိုလို ထွက်လာမည်။ ယခုတော့ ပုလိပ်လိုက်နေလို့ ထမီခြုံပြီးပုန်း နေကြတယ်။
မှတ်မိသေးတယ်- တချိန်က Facebookပေါ်မှာ Mizzima သတင်းဠာနက အယ်ဒီတာချုပ်ကို သူခိုးဖေါင့်သုံးမှုနှင့် မေးလိုက်တာ ဒီဘဲကြီး အမြီးဖင်ကြားညှပ်ပြီး ထွက်ပြေးပါလေရော့။
Laka Thang said:	February 10, 2012 at 1:31 am
ကျွန်တော်လည်း သုံးခဲ့ဘူးတယ်။ စက်အသစ်ရတော့ ဒီသူခိုးကို မထားတော့ဘူး။
ဒီ http://thanlwinsoft.org ကနေ Firefox browser အတွက် ထပ်တိုးလေးကို ယူလိုက်တော့ သူခိုးနှင့်ရေးထားတာ အိုကေ ပါဘဲ။ ( အမှားပြင် ကလေးနှိပ်)
နော်လွမ်းမူ said:	February 11, 2012 at 11:47 pm
ကျမလည်း ဒီအတုအယောင်ဖေါင့်ကို အစဦးကတည်းက သိတာ။ လမ်းပြဝက်ဆိုဒ် http://www.myanmarbible.com/documents/475.html က ပိတောက်ဖေါင့်ကို ၂၀၀၆ခုနှစ်က အသေးစိတ် တင်ပြပေးထားတာ ကျေးဇူးတင်ရမည်။ အသိအိမ်ရောက်လို့ ဒီဖေါင့်တုကို ရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်။ ပိုပြီးခက်တာ တွေ့ရတယ်။ မကောင်းတဲ့ဟာ ခက်ခက်ခဲခဲ သုံးချင်စိတ် အဲဒီတည်းက ကုန်သွားခဲ့တယ်။ ဖေါင့်အမှန် သုံးမှ ကမ္ဘာ့အဆင့် မှီလိမ့်မည်။ နော်လွမ်းမူ
Hon. Ba Than Maung said:	February 18, 2012 at 7:48 pm
ဒါကလည်း သူခိုးဖေါင့် သုံးသူတွေကို ကြည့်ရင် ကလေးတွေက ကျောင်းတုန်းက ပြည်သူ့နီတိ ကိုမသင်ခဲ့ရ ပါလိမ့်မယ်။ လူမှုရေး အကျင့်ပါဘဲ။
အကျင့်ပျက်ပြားမှုကို မိမိဘာသာ ပြင်ရမည်တာဝန် ရှိပါတယ်။ သူခိုးဖေါင့်ကို သုံးတိုင်း အပြစ်ရှိနေသည်ကို မခံစားနှိုင်လျှင် တဇောက်ကန်း လူမိုက်လိုမျိုး ဖြစ်ရမည်။
တင်ကိုလတ်(ချောချော) said:	February 25, 2012 at 6:33 am
ဇီကို ဂျီပြောင်းလိုက်လို့ သူခိုးဇော်ဂျီဖေါင့် သုံးခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ စိန်ပြောင်းကို ကြိုက်လို့ပါ။မွေးကတည်းက လိင်ဆန့်ကျင်ဖက်ကို တအားသန်နေတာ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။ မြန်မာပြည်မှာဆို စာနာချင်းကင်း ရိုင်ဆိုင်းစွာ -အချောက်၊ မိန်မရှာ၊ ဂန်ဒူး၊ ဂျီဘုန်း၊ စသည်ခေါ်ဆို နောက်ပြောင်းခံရတယ်။လူတွေက မရင့်ကျက်သေးလို့တကြောင်း၊ မနာလိုလို့တကြောင်း၊ ဒီလိုဖြစ်နေတာ။
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ဗြောင်ဗြောင်ဘဲ ကျားချင်း၊ မချင်း၊ ဖက်လည်တကင်း အများတကာကြား တူစုံလမ်းလျှောက် ကစ်ပေးကြနဲ့ ဘာမှပူစရာ မလိုဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတောင် ဒီလိုမျိုး အခြေရောက်နေပြီ။
zinyaw said:	February 25, 2012 at 6:52 am
ဟုတ်ကဲ့။ မှတ်မိသေးတယ်။ ငယ်တုန်းက ကျောင်းအတန်းထဲမှာ သူငယ်ချင်းက ဘယ်သန်လို့ စာရေးလျှင် ဘယ်နဲ့ရေးတာကို ဆရာမက
ဒုတ်နှင့်ရိုက်ပြီး ဆုံးမလို့ သူ့မိဘတွေက လာဖြေရှင်းရတယ်။ မွေးအတိုင်း သန်ရာလုပ်တာ ဘာမှ မရှက်မကြောက်ပါနဲ့။မြန်မာပြည်လည်း
ဒီမိုကရေစီရခံ နီးပြီးဆိုတော့ နောက်အနှစ် (၃၀ – ၄၀) လောက်ဆို အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလို နားလည်တတ်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဟာသ နှင့် ဗဟုသုတ
ဘယ်လှည့် – ညာလှည့် ?
ဗဟုသုတ	Blog at WordPress.com.